IP55 Switch & Socket ပေးသွင်းသူများနှင့်စက်ရုံ - China IP55 Switch & Socket ထုတ်လုပ်သူများ
1 Gang IP55 စီးရီးရေစိုခံ Socket Shell
မော်ဒယ် NO ။ : IP55 စီးရီး ADL55-1GS-ES
မူလနေရာ： ဝမ်ကျိုး၊ တရုတ်
： Wall Socket ကိုရိုက်ပါ
GroundingRated ဗို့အား： 250V ~
လက်ရှိ： 16A အဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့သည်
လျှောက်လွှာ： လူနေအိမ် / အထွေထွေရည်ရွယ်ချက်များ
IP55 Series ရေစိုခံ Surface Switch + BS Socket
Model NO .: ADL-S、 ADL-SS SS ADL-2-SS、 ADL-S2S、 ADL2-S2S、 ADL-2S、 ADL2-2SS、 ADL-S4S、 ADL2-S4S
Grounding： Standard Grounding
အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဗို့အား： 250V ~
မော်ဒယ် NO ။ : ADL55-3GS-2ES
မော်ဒယ် NO ။ : ADL55-4GS-ES
မော်ဒယ် NO ။ : ADL55-3GS-ES
မော်ဒယ် NO ။ : ADL55-2GS-ES
မော်ဒယ် NO ။ : ADL55-1GS-ES
IP55 Series ရေစိုခံမျက်နှာပြင်ခလုတ် + Australia Socket
မော်ဒယ် NO .: ADL-AU、 ADL-AUS、 ADL2-AUS、 ADL-AU2S、 ADL2-AU2S、 ADL-2AU、 ADL-2AUS、 ADL2-2AUS、 ADL-AU4S、 ADL2-AU4S
IP55 Series ရေစိုခံမျက်နှာပြင်ခလုတ် + Pin Socket
Model NO .: ADL-FH、 ADL-FHS HS ADL2-FHS、 ADL-FH2S、 ADL2-FH2S、 ADL-2FH、 ADL-2FHS、 ADL2-2FHS、 ADL-FH4S、 ADL2-FH4S
IP55 Series ရေစိုခံမျက်နှာပြင်ခလုတ် + တောင်အာဖရိက Socket
Model NO .: ADL-SA、 ADL-SAS、 ADL2-SAS、 ADL-SA2S、 ADL2-SA2S、 ADL-2SA、 ADL-2SAS、 ADL2-2SAS、 ADL-SA4S、 ADL2-SA4S
IP55 Series ရေစိုခံမျက်နှာပြင်ခလုတ် + ပြင်သစ်စီးရီး
မော်ဒယ် NO .: ADL-FR、 ADL-FRS、 ADL2-FRS、 ADL-FR2S、 ADL2-FR2S、 ADL-2FR、 ADL-2FRS、 ADL2-2FRS、 ADL-FR4S、 ADL2-FR4S
IP55 Series ရေစိုခံမျက်နှာပြင်ခလုတ် + BS Socket + Schuko Socket
မော်ဒယ် NO .: ADL-SR、 ADL-SRS、 ADL2-SRS、 ADL-SR2S、 ADL2-SR2S、 ADL-2SR、 ADL-2SRS、 ADL2-2SRS、 ADL-SR4S、 ADL2-SR4S、